November 2021 - Page 39 of 41 - MM News
ငါးဖမ်းသွားခဲ့ရာမှ ငါးတစ်ကောင်မှ မရလာဘဲ ပိုက်ကွန်တွင် ယွမ်၁.၈ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသော ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် ကြေးဝါလိပ်ကြီးကို ရရှိလာခဲ့သည့်အဖိုးအို
November 3, 2021 Thiha Ko Ko 0
တရုတ်နိုင်ငံမှ ငါးဖမ်းအဖိုးအိုတစ်ဦးဟာ ငါးပိုက်ကွန်ဖြင့် ငါးဖမ်းကာ စီးပွားရှာနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့တွင် ငါးဖမ်းပေါ်လည်း ငါးတစ်ကောင်မှ မရသဖြင့် စိတ်ဓာတ်ကြနေသည့်အချိန်တွင် ငါးပိုင်ကွန်၌ ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် ကြေးဝါလိပ်ရုပ်ကြီးကို ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကြေးဝါလိပ်ပေါ်တွင် မြှားချွန်ပုံစံလေးလုစိုက်နေပြီး လိပ်၏ကျောပေါ်တွင်လည်း ကမ္ဗည်းစာများ ရေထိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဖိုးအိုဟာလည်း ကြေးဝါလိပ်ရုပ်မှာထူးချွန်နေသည့်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံ ရှေးဟောင်းပုတိုက်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ရာမှ ကြေးဝါလိပ်ကြီးဟာ […]
လိုင်းပေါ်မှာအာချောင်နေတဲ့လူတွေကို သူမနဲ့ဘယ်လိုပုံစံယှဉ်ပြိုင်ချင်တာလဲလို့ ဒဲ့မေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ ဖိုက်တင်မင်းသမီး ယဉ်လတ်
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ယဉ်လတ်ကိုတော့ အားလုံးသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာလည်းလုံးဝမပါဝင်ပဲရေငုံနှု.တ်ပိတ်နေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ ဘယ်လိုပဲေ.ဝဖ.န်နေပါပစေလုံးဝကိုမတုံ့ပြန်ပဲအေးဆေးစွာနဲ့ နေနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယဉ်လတ်ဟာဆိုရင် စစ်တပ်ထောက်ခံသူအနေနဲ့တင်မဟုတ်ဘဲMWD ချန်နယ်အတွက်အစီအစဉ်တစ်ခုရိုက်ကူးထားပါသေးတယ်။ သူတင်တဲ့ပုံတွေအောက်မှာလည်းပရိသတ်တွေကဝိုင်းပြီးပြောထားကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်နော်။ ဘယ်သူတွေဘယ်လိုပဲ ပြောနေပါပစေယဉ်လတ်ကတော့လုံးဝကို ဂရုမစိုက်ပါဘူးတဲ့။ ဒီနေ့မှတော့တပ်ချစ်သူယဉ်လတ်ကငပိ.န်းတွေကိုအနီကောင်တွေသိစေချင်တာကသူမဟာဘယ်နေရာကတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါစေနိုင်ငံအတွက်တပ်မတော်နဲ့အတူထမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်လို့ရေးသားလာပြီးနောက်မှာတော့ပုံလေးတွေနဲ့အတူတင်ပေးလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ပို့စ်အောက်မှာတော့ထောက်ခံသူတစ်ချို့နဲ့ေ.ဝ ဖ.န်သူတစ်ချို့ပွဲစည်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာအဖက်ဖက်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပြီးကိုယ်ခံပညာမှာလဲတော်သူတယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမျိုးသားတချို့အနေနဲ့အောက်တန်းကျကျလိုင်းပေါ်ကအော်မနေပဲဘယ်လိုမျိုးယှဉ်ပြိုင်ချင်လဲသူမဖက်ကအဆင်သင့်ပဲလို့ရေးထားပါတယ်။ […]
ခြံဝန်းထဲမှ ခရုလေးတွေကို လိုက်ဖမ်းပြီး မျက်နှာပေါ်တွင် လျှောက်သွားခိုင်းကာ အသားအရေလှပဖို့အတွက် စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်နေသည့် ကောင်မလေး
အလှအပဆိုသည်မှာ လူ့လောကထဲတွင် အရေးကြီးသောအရာများထဲမှာ ပါဝင်နေသာ အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အတူ ကောင်မလေးအများစုဟာ အမြဲတမ်းလှပနေစေရန်အတွက် အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုတို့ကို ဂရုဆောင်လုပ်ဆောင်တတ်ပြီး အရေးကြီးဆုံးသော မျက်နှာလေးတွေကို ပေါင်းတင်ပြုပြင်ကြပါတယ်။ တိုးတက်ခေတ်မီလှသည်နှင့်အမျှ အသားအရဆထိန်းသိမ်းရန် နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ရွေးချယ်ပြုလုပ်နိုင်ကြကာ သဘာဝနည်းလမ်းကောင်းများစွာလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ယခုတွင် ကောင်မလေးဟာ အသားအရေထိန်းသိမ်းရန် နည်းလမ်းများစွာကို အသုံးမပြုဘဲ လရုငယ်လေးများကို အသုံးပြုပြီး […]
တိုင်းတစ်ပါးတွင် အလုပ်အတူတူကြိုးစားခဲ့ပြီး ချမ်းသာလာခဲ့သောအခါ မိခင်နိုင်ငံသို့ ဒေါ်လာ၅သန်းတန် ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ်ကို ဝယ်ယူပြီး အိမ်ပြန်လာခဲ့သည့် သူငယ်ချင်းနှစ်ဦး
လူသားတိုင်းတွင် အောင်မြင်ချမ်းသာလာရနိုင်မည့် အခွင့်အရေးကို ရရှိထားကြပါတယ်။ အမှန်တကယ်သာ မရပ်မနားဘဲ ကြိုးစားနေလျှင် အောင်မြင်မှုဆိုတာ မလွဲမသွေရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုတွင်လည်း ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသားဖြစ်ကြသည့် Shock Khoa Pug နှင့် Vuong Phamဆိုသည့် သူငယ်ချင်းနှစ်ဦးတို့ဟာ တိုင်းတစ်ပါးသို့သွားရောက်ပြီး အလုပ်များကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ပြီး အောင်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ ကိုယ်ပိုင်ယူကျူ့ချာနယ်ဖြင့်လည်း ဝင်ငွေများစွာရရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ […]
ချစ်တဲ့မိန်းကလေးပရိတ်သတ်တစ်ယောက်က သူမရဲ့နာမည်ကိုတက်တူးထိုးပြီး အပြည့်အဝအားပေးခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့မေပန်းချီ
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မေပန်းချီဆိုတာ ပရိတ်သတ်တွေတစ်ခဲနက် အားပေးမှုဝန်းရံမှုတွေကိုရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ပါပဲနော်။ အမိုက်စားခန္တာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှတွေနဲ့ တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တဲ့ ပုံစံလေးပေါက်တဲ့ မျက်နှာလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူမဟာ နာမည်ကြီး မင်းသမီးတွေထဲ ကတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း အပြစ်ပြောစရာမရှိအောင် ဆေးစက်ကျရာအရုပ်ထင်အောင် အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ပုံဖော်နိုင်သူ တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ အရမ်းမိုက်တဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှတွေကို ပေါ်လွင်စေတဲ့ ဆက်စီကျကျ […]
ဆိုးရွားလွန်းတဲ့ရောဂါဆိုးတစ်ခုကိုခံစားနေရလို့ ရုတ်တရက်ဆေးရုံတက်ပြီး ခွဲစိတ်မှုခံယူလိုက်ရတဲ့ မင်းသမီးရတနာခင်
သရုပ်ဆောင် ရတနာခင်က ကျောက်ကပ် ဆီးသွားတဲ့ လမ်းကြောင်းမှာ ရောဂါဖြစ်နေတာကြောင့် ဆေးရုံတက်ပြီးကုသမှုခံယူကာ အခုဆိုရင်တော့ ဆေးရုံကနေဆင်းပြီး အနားယူနေတယ်လို့ သူမရဲ့ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။ “ အခုတော့ဆေးရုံကဆင်းရပါပြီ အရမ်းနာကျင်တဲ့ဝေဒနာကို ခံစားနေရလို့ ဘယ်သူ့ကိုမှလဲ စကားကောင်းကောင်းမပြောနိုင် စာလည်းမပြန်နိုင်ခဲ့တာ ခွင့်လွှတ် နားလည်ပေးကြပါ၊ ကျောက်ကပ်ကနေဆီးအိမ်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာကျောက်က ပိတ်နေပြီး အရမ်းနာအရမ်းအောင့်လို့ ခွဲစိတ်ကုသခဲ့ပါပြီ ကျောက်ကလည်းကြီးနေတယ်လို့ပြောပါတယ်၊ […]
သူ့မှာချစ်သူကောင်မလေးရှိနေတာကို သိရက်နဲ့မီးပွိုင့်မိနေတုန်း အီစီကလီလာလုပ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကြောင့် အခက်တွေ့နေတဲ့ စိန်ဖြိုးလှိုင်
သရုပ်ဆောင် မောင်နဲ့ ရီရီပွင့်ဖြူတို့ နှစ်ဦးဟာ ချစ်သူသက်တမ်း (၈) နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက်နဲ့ ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း သူတို့အတွဲလေးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို အမြဲစောင့်ကြည့်အားေ ပးနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကလည်း စိန်ဖြိုးလှိုင်ရဲ့Tik Tok အကောင့်တွင် ဗီဒီယိုလေးတစ်ခု တင်ပေးလာခဲ့ပါတယ်နော်။ ဒါကတော့ မီးပွိုင့်မိနေတုန်း သူ့ဘေးကပ်ရပ်ကားပေါ်ကနေ […]
သူမရဲ့သားလေးရှိရာကို (၂)နှစ်တိတိသွားမတွေဖြစ်တဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းကိုပရိတ်သတ်တွေအားပြောပြလာတဲ့ သန္တာလှိုင်
ယနေ့တိုင်း မိန်းကလေးတိုင်းအားကျနေရလောက်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှေ တွကိုပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တာကတော့ သန္တာလှိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်သာရလာပေမယ့် သူရဲ့အလှတွေကြောင့်ယနေ့တိုင် အားကျချစ်ခင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်ကျော်သက်လေးအတိုင်းကိုအမြဲနုပျိုလှပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ မော်ဒယ်လောကမှာလည်း တက်သစ်စမော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်တွေပါ မလေးစားမနေနိုင်လောက်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ သူမဟာ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျန်းမာရေးကိုလည်းလိုက်စားပြီး ခန္ဓာကိုယ်ထိန်းသိမ်းတာတွေလုပ်သ လိုမိသားစုလေးနဲပျော်ရွှင်စရာအချိန်တွေကိုဖြတ်သန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ခုမှာတော့သားလေးနဲ့မတွေ့ရတာ ၂နှစ်ပြည့်တဲ့အကြောင်းလေးကို ပြောပြထားတာပါ။သားလေးနဲ့ မတွေ့ရတာ၂နှစ်ပြည့်တော့မယ်…သူတို့လေးတွေနဲ့တွေ့ဖို့စဉ်းစားလိုက်တိုင်း အိမ်ပြန်မလာနိုင်တော့သားသမီးတွေကိုမျှော်နေမိတဲ့မိဘတွေရဲ့ ရင်ထဲကဝမ်းနည်းချက်တွေကို ရင်နဲ့အပြည့်ခံစား ရပါတယ်လို့ …. […]
သားငယ်လေးJaden ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို အမှတ်တရဖော်ပြလာခဲ့တဲ့ ဖေဖေအာဘွိုင်
အာဘွိုင်းကတော့ အနုပညာလောကမှာ နေရာတစ်ခုကိုရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်သူတစ်ယောက်ပါ ။ အေးချမ်းသာယာပြီး ကြည်နူးစရာကောင်းလွန်းတဲ့ မိသားစုလေးကို တည်ဆောက်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ အာဘွိုင်းကတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေးဖြစ်တဲ့ Scarlett နဲ့ Jaden လေးတို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အာဘွိုင်းတို့မိသားစုလေးကတော့ ပရိသတ်တွေအားကျချစ်ခင်ရတဲ့ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်မိသားစုလေးဖြစ်ပါတယ်။ အာဘွိုင်းက […]
ကျောင်းတွေပိတ်ထားတာမို့ ပျင်းနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကို ချစ်စဖွယ်ပြောလာတဲ့ ဖွေးစိန်ရဲ့တူမလေး ထိပ်ထားသခင်
November 2, 2021 Thiha Ko Ko 0
ကလေးဆိုပေမယ့် ကျောင်းတွေပိတ်ထားတာမို့ ပျင်းနေတဲ့ အကြောင်းလေးကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြလာတဲ့ ထိပ်ထားသခင်…ထိပ်ထားသခင်လေးကတော့ ဖေ့ဘုတ်ကနေ လူသိများလာပြီးနောက် ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်. သူမကတော့ ကြော်ငြာများစွာရိုက်ကူးလာရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ နာမည်ကြီး မင်းသမီးများဖြစ်တဲ့ သက်မွန်မြင့်နဲ့ ဖွေးဖွေးတို့နဲ့အတူ ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေမှာ သရုပ်ဆောင်ရလောက်တဲ့အထိကို အောင်မြင်လာသူလေး ဖြစ်ပါတယ်နော်… နာမည်ကြီး မင်းသမီးများဖြစ်တဲ့ သက်မွန်မြင့်နဲ့ […]